Rasaasa News – Madaxwayne Cabdi oo la Kulmay Odayaal dhaqameed ka Socda Hargeysa
on March 24, 2012 8:00 pm
Jijiga, Mar 25, 2012 [ras] – Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa kulan la qaatay wafti Odayaal dhaqameeda oo ka socday maamulka Somaliland.
Oday dhaqameedyadan oo maalmo ku sugan magaalada Jijiga, ayaa socdaalkoodu la xidhiidhaa xasaradii dhawaan ka dhacday degaanka Gaashaamo ee dalka Ethiopia.
Waftiga oday dhaqameedyada ka socoda maamulka Somaliland oo ka kooban todoba xubnood , waxaa si khaas ah u soo diray Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo. Xubnaha oday dhaqameedyada maamulka Somaliland waxaa ka mid ah suladaan Maxamed suldan Xirsi iyo oday xaaji cabdikariim xuseen [cabdi waraabe].
Oday dhaqameedyada ayaa saaka kulan xasaasiya kula qaatay xafiiskiisa Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Waxayna oday dhaqameedyadu ku farxeen kalsoonida uu u muujiyey Madaxweyne Cabdi, iyada oo lagu heshiiyeyy in kulan balaadhan oo laggaga hadli doono nabada lagu qabto degmada Gaashamo ee gabalka Dhagaxbuur.
Madaxweynaha iyo oday dhaqameedku ma ayna sheegin taariikhda dhabta ah ee uu dhacayo kulankaasi iyo dadka ka qayb galaya midna.
Lama sheegin in ay is arkeen ama ay iskari doonaan oday dhaqameedyada dhigooda ah ee ka soo jeeda degaanka Somalida Ehiopia.
Faahfaahin dheeraad ah lagam bixin wadahadalka dhabta ah ee dhexmaray madaxweynaha iyo oday dhaqameeyada iyo doorka hadal ee madaxweynaha.
Kolka ay dhibaato ka dhex dhacdo beelaha Somalida, waxaa xalka gaadha cuqaasha beelaha Somalida, iyaga oo raacaya xeer dhaqameedka beelaha Somalida, ayey gaadhaan xal nabadeed oo waara.
Kolka ay arimuhu galaan dhinaca siyaasada waxaa xalkeeda leh siyaasiyiinta dawladaha iyo maamulada, iyaga oo ka wada xaajooda wax ay isku hayaan, ugu dambayntana gaadha xal siyaasadeed oo warqado la kala saxiixdo.
Hadaba, waxay dad badani isweydiin karaan muxuu yahay xalka ay wada gaadhi karaan siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedyada labo degaan.
Somalidu waxay tidhaahdaa gadhba gadh baa la tusaa. Degaanka Somalidu waxaa uu leeyahay cuqaal ku filan xalinta khilaafka beelaha, iyaga oo maraaya xeer dhaqameedka Somalida.
Dhacdadii dhawaan degaanka gaashaamo, waxay ahayd arin siyaasadeed waayo dagaalka gacanta iyo ka afkaba waxaa si toos ah uga qayb galay maamulka Somaliland, dulmi aan gabasho lahayna waxay ku sameeyeen arimaha daakhiliga ee dalka Ethiopia.
Maamulka Somaliland iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia in ay arintaas ka wada fadhiistaan oo xal mustaqbal oo saxiix leh la gaadho waa arin lagama maarmaan ah.
Maamulka Somaliland sixiix la,aan way adagtahay in uu joojiyo faraglinta arimaha gudaha ee dalka Ethiopia, sanadkiina ugu yaraan labo goor ayay faragalin xadka ah dhacdaa tan iyo sanadkii 2004.